Sujet type 4: MALAGASY - Baccalauéat série A-C-D MADAGASCAR - Informations et Actualités sur Madagascar
Education Sujet type 4: MALAGASY - Baccalauéat série A-C-D MADAGASCAR
Sujet type 4: MALAGASY - Baccalauéat série A-C-D MADAGASCAR
by Alpha world on 00 h 08 in Education
LAZA ADINA MALAGASY: FANADIHADIANA LAHATSORATRA
Heverin’ny sain-tsika nankaiza ny fifanajana sy ny fihavanana ny maha-Malagasy ny Malagasy.Nankaiza ny tahotra ny tsiny sy ny tody nampihorohoro ny Ntaolo, ka nahatonga ny fisorohana azy hameno ny ampahatelon-kabariny?
Heverin’ny sain-tsika efa zafindraony fa mari-pandrosoana ny tsy nisaringotra amin’ireny zavatra ireny. Tsy mampaninona antsika intsony ny mamingavinga olona, fa ny nahitana masoandro aza tsy enin-kaja , tsy enim-boninahitra; ary ny tsiny sy ny tody moa dia efa nampiraisin-dalana amin’ny finoanoam-poana.
Hadinontsika fa ny tena votoatin’ny atao hoe “fandrosoana” dia fiezahana hihataka amin’ny maha biby mba hanakatra ny fiainana sy fiarahamonina ambonimbony kokoa. Ny fisainana iraisam-pirenena, di any fahafantarana fa tsy misy firenena afaka hivelomana tsy man-javatra hajaina sy atahorana; ary avy amin’io no nahaterahan’ny fitsipi-boninahitra teo amin’ny tandrefana, ny Didy folo teo amin’ny Jiosy ary ny tsiny sy ny tody teo amin’ny Malagasy. Arofanina avokoa ireny mba tsy hianjerana amin’ny fanjakan’I Baroa.
FANAGASIANA, takila 46-48
By Alpha world at 00 h 08